Bisaylka Ka Muuqday Khudbadii Madaxweyne Biixi Ee Shalay Iyo Bar-Bardhiga Kuwiisii Hore | Berberatoday.com
Bisaylka Ka Muuqday Khudbadii Madaxweyne Biixi Ee Shalay Iyo Bar-Bardhiga Kuwiisii Hore
Hargeysa(Berberatoday.com)-Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa shalay munaasibad loo sameeyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa, wuxuu ka jeediyay khudbad kooban oo ka duwan khudbadihii hore ee looga bartay.
Madaxweyne Biixi, wuxuu shalay khudbadiisa ka dheehanayay gobal yar oo warqad ah oo ay u muuqatay inuu ku soo qodobaystay khudbadiisa. Waxa uu shalay gebi ahaanba meesha ka saaray inuu ka hadlo qodobbo uu inta badan khudbadihiisa ku soo dari jiray; ugu horreyn Madaxweyne Biixi, waxa shalay ka muuqatay hayinnimo iyo in uu waayo aragnimo korodhsaday muddadii uu xilka hayey.
Madaxweyne Biixi, wuxuu gebi ahaanba shalay meesha ka saaray dhawr qodob oo aanu khudbadihiisa ka reebi jirin. Tusaale ahaan, waxa Madaxweyne Biixi looga bartay inuu garnaqsi iyo gar ugu baaqo cid kasta oo tabasho qabta amaba aaminsan fikir siyaasadeed oo ka duwan aragtidiisa hoggaamineed, “Gar baan ka leeyahay.” Ayuu ku caan baxay Madaxweyne Biixi, laakiin shalay kelmadaas wuu ka saaray gebi ahaanba khudbadiisa, waxaau u muuqda inuu ku bedelay ereyo muujinaya in uu diyaar u yahay talo-qaadasho iyo dhegeysigaa tusaaleyaasha loo soo jeediyey, “Dhammaan waxaan qaatay wixii talo iyo tusaale ahaa ee halkan ay ka yidhaahdeen madaxda axsaabtu, hadaladaasi waxay u badnaayeen oday ayaad tahay ee dadka isu soo jiid oo midee marxaba iyo guddoon taasi waan aqbalay.” Ayuu yidhi oo uu hadalkiisa ku bilaabay.
Madaxweyne Muuse Biixi, wuxuu farriimo hawada u marin jiray dawladda Soomaaliya, isagoo ugu hal qabsan jiray colaadda Tuko-raq, laakiin shalay taas bedelkeed wuxuu hawada u mariyay farriin nuxur ahaan muujinaysa waano, oo ah in madaxda Soomaaliya ay ku daydaan Addis Ababa oo ay maraan jidka walaaltinimo ee ay madaxdii Itoobiya iyo kuwa wakhtiganiba u mareen madaxbaanimadii Asmara iyo halganka ay maanta ugu jiraan in cuno-qabataynta hubka laga qaado.
Dad badan oo reer Somaliland ah ayaa dhawr goor Madaxweyne Biixi si dadban iyo si toos ahba ugu soo jeediyay inuu meesha ka saaro weedhaha xanafta leh ee uu hawada u mariyo dawladda Somaliya. Bulsho badan ayaa qabta in si dib loogu bilaabo wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya inay muhiim tahay inay madaxda Somaliland iyo Soomaaliya yareeyaan weedhaha wax sii kala fogayn kara.
Madaxweyne Biixi, waxa kale oo khudbadihiisa hore lagu arkay faan iyo ammaan uu kula dul dhaco xubno ka mid ah wasiiradiisa iyo sida ay shaqada u wadaan. Taas bedelkeed shalay muu soo hadal qaadin hal wasiir marka laga reebo Wasiir Maxamed Kaahin oo uu ku tuuray ereyo kaftan ah. Waa suurtogal in Madaxweyne Biixi dareemay aragtida uu rayul caamku ka qabo golihiisa wasiirada. Tusaalena waxa u ah macalinkii ahaa gacanta midig ee Madaxweyne Biixi wakhtigii ololihii Axmed Ismaaciil Samatar oo dhawaan sheegay inaanu arag cid ka raalli ah xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi iyo in uu isaga laftigiisuna aragtidaas dadka la qabo.
Waxa intaas dheer in Madaxweyne Biixi uu arrimo khuseeya arrimaha gudaha Somaliland uga hadlay si kor ka xaadis ah oo waayeelnimo ka muuqato. Tusaale ahaan wuxuu sheegay inuu albaabada u furayo cid kasta oo wax tabanaysa, wuxuuna hoos u dhigay in qori caaradii xal lagu raadiyo. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya iyadoo si joogto ah loogu diro baaqyo badan oo ah inuu ka shaqeeyo isu soo dhawaynta shacabka Somaliland oo markii u horaysay aad u kala qaybsan, waxaana la eegi doonaa in baaqiisani noqdo mid hadal ah oo keliya iyo inuu ficil u bedelo.
Madaxweyne Biixi oo xilligii ol’olaha iyo intii uu xilka hayeyba looga bartay hadallo uu qodobbo aad u kala fog uga hadlo qaab uu ku muujinayo xogogaalnimo iyo aqoon dheeri ah oo uu u leeyahay, xitaa haddii ay yihiin kuwo cilmiyada aan takhasuskiisa ahayn la xidhiidhay, ayaa shalay si aqoonyahannimo ah uga garaabay aqoonta goobta uu tegey taallay iyo in uu diyaar u yahay in uu dadkeeda u daba fadhiisto arrimo badan.
Si kastaba ha ahaate, Madaxweyne Biixi 8 bilood oo uu xilka madaxweynenimo ee Somaliland hayay, waxa shalay khudbadiisa ka muuqatay isbeddel weyn oo garawshiyo, u dulqaadashada naqdiga iyo u dhego furnaanta aragtida ka soo horjeedda ah. Arrimahaas oo calaamad u noqon kara waayo aragnimo iyo bisayl uu ku dhagaysto aragtiyaha siyaasadeed ee ka soo horjeeda.